In isla meesha la taagnaado waxeey la mid tahay in gadaal loo socdo – Arviika waa degmad horay uu socoto. Dad ahaan markii loo fiiriyo degmada Arvika labaad ayee ka soo galee Värmland, ayadoo leh 26 000 oo qof. Bartamaha Arvika waxaa dagan in ka badan dadka degan degmada haafkooda. Arvika waxeey lee dahay tayo-nololeed oo sareeyso, halkaase ee dhawaanshaha ka dhaxeeyo dadka uu keenaayo amaan lagu daremo iyo dheelitirid dhinaca nolosha.
Degmada Arvika waxaa ku yaalo shirkado guri degmadeed iyo kuwo madaxbanaan. Halkaan waxaa laga dooran karaa in la dago guri, guri saf ah ama filo haddii la rabo in la gato ama la kireeysto guriga. Shirkada degmada ee lee dahay Arvika Fastighets AB waa maamulaha guri ee ugu weeyn ayadoo heeyso ku dhawaad 3,000 oo guri. Waxaad degmada Arvika boggooda internetka heleysaa liis eey ku yaallaan shirkadaha guryaha laga kireysto.
Waxaa jiro ku dhawaad 370 ururo ka howl galo howlo xilli firaaqo, dhaqan iyo diin. Waa jiraan in ku filan oo goob isboorti iyo goob jimicsi ee gudaha degmada, jidad lagu socdo ee gudaha bey’ad leh dabiicad qurxoon, jawi hees oo taajir laga yahay, yar iyo weeynba ee ku jiraan. Farshaxan iyo dhawan waa mid uusoo hormarsan dhismaha. Halkaani waxaa ka jiro urur soomaali iyo keldansk iyo xarun islaami iyo kaniisado sidii kaniisada iswiidhan, kaniisada faafinta, kaniisada bingst iyo shuhuud yaho. Diiwaanka jaaliyadaha waxaad ka baari kartaa jaaliyadaha waxqabadka leh ee degmada.
Madaama aan lee nahay baahi isfahmid ee labada geesba ah, waxaan qabana turjumaan markii loo baahdo. Waxeey ku saabsanaa kartaa shaqo, iskuul, booqasho hey’ad dowaleed iyo daryeelka bukaanka. Turjumaanida badankeed waa mid taleefooneed.
Förskollärare öppna förskolan Lärare i förskola/Förskollärare
Projektledare - Thermia Projektledare, bygg och anläggning
COFFEE SHOP MANAGER ARVIKA NYÖPPNING! Restaurangchef
Chef IT / Teknik Nätverkstekniker
Gymansielärare , Idrott och hälsa Lärare i gymnasiet
Yrkeslärare , El - och energiprogrammet Lärare i gymnasiet
Miljö och kvalitetschef QEHS till Forgex Kvalitetsingenjör/-tekniker, maskin
Lagbas / Beläggningsarbetare Värmland - Asfalt Väg-och anläggningsarbetare
Sjuksköterska Sjuksköterska, psykiatrisk vård
Hemstäd Arvika Städare/Lokalvårdare
Lediga jobb som montör inom i Arvika! Montör, metallprodukter
Butikssäljare till Arvika Butikssäljare, fackhandel
Utbildare Lärare i prakt./estet och annat ämne
Ekonomiadministratör sökes till Arvikaföretag Ekonomiassistent
Ekonomiassistent till kommunalt bolag Ekonomiassistent
1 659 km2
Karlstad 80 km
Oslo (Norge) 140 km